अनुहार र छालाको सौन्दर्यता रक्षा गर्न यसरी दैनिक लगाउनुहोस् सनस्क्रिन Canada Nepal
अनुहार र छालाको सौन्दर्यता रक्षा गर्न यसरी दैनिक लगाउनुहोस् सनस्क्रिन
चैत्र १७ २०७७
काठमाडौं । सनस्क्रिन जसलाई सनब्लक वा सन ट्यान लोशन पनि भनिन्छ। यो लोशन, स्प्रे, जेल, फोम जस्तो विस्तारित प्रकारमा बजारमा पाइने गर्दछ। यसले सूर्यको अल्ट्राभायोलेट (युभी) विकिरणलाई अवशोषित गर्दछ। यसको दैनिक प्रयोगले अनुहारको छालाबाट दाग धब्बाहरु हटाउन, चाउरीपन घटाउन देखि छिट्टै बुढ्यौली देखिने समस्याहरुबाट बचाउँने गर्दछ। यसैगरी, सनस्क्रिनमा एसपीएफ र पीए भ्यालु हुने गर्दछ।
एसपीएफ भनेको सन प्रोटेक्टिङ फ्याक्टर हो । एसपीएफले सूर्यबाट आउने अल्ट्राभायोलेट विकिरण ’ए’ को लागि काम गर्छ भने पीए भ्यालुले अल्ट्राभायोलेट विकिरण ’बि’ को लागि काम गर्ने गर्दछ। किनभने, दुवै किरणहरुले छालालाई नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी, बढी एसपीएफ भएको क्रिम लगाउँदा त्यसले राम्रो काम गर्ने र कम एसपीएफ भ्यालु भएको क्रिमले काम नगर्ने भ्रम रहिआएको छ।
औसतरुपमा एसपीएफ भ्यालु २० वा त्योभन्दा बढीको सनस्क्रिन लगाउँदा छाला तथा यसको सौन्दर्यतालाई राम्रो गर्ने चर्म तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडाले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए।
एसपीएफ भ्यालुको रेञ्ज कम्पनी अनुसार फरक फरक हुन्छ। छालालाई कुन रेञ्जले सुविधा पुग्छ, त्यो लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ। कम्तिमा एसपीएफ भ्यालु २० भएको सनस्क्रिन उपयोग गर्दा छालालाई फाइदाजनक हुन्छ। यद्यपि, एसपीएफ भ्यालु २० भन्दा कम भएको क्रिमहरु छाला वा अनुहारमा नलगाउन उनले सुझाव दिए ।
कस्तो सनस्क्रिन लगाउने ?
आफ्नो छालालाई कस्तो प्रकारको क्रिमले राम्रो गर्छ, यसबारे स्पष्ट हुनुहोस् र दैनिक प्रयोग गर्नुहोस्। सामान्यतया सनस्क्रिनहरु दुई प्रकारका हुन्छन्, फिजिकल र केमिकल।
फिजिकल सनब्लकले छालामा हानिकारक किरणहरु जानदिँदैन। यसले बाहिरबाट ती किरणहरुलाई फ्याकिदिन्छ। केमिकल सनब्लकले छालामा सूर्यको प्रकाशलाई अवशोषित हुन दिँदैन। सूर्यको प्रकाशबाट आउने अल्ट्राभायलेट ए, बि लाई छालामा अवशोषित हुन दिँदैन।
जहिल्यै पनि सनब्लक लगाउँदा कम्तिमा एक चिया चम्चा अर्थात् ४ देखि ५ एमएल लगाउनु पर्ने डा. खतिवडाले जानकारी दिए। सनब्लक लगाउँदा सर्वप्रथम मज्जाले मुख धुने, सुख्खा छाला छ भने थोरै मोइस्चराइजर लगाउने र सनब्लक लगाउने । यो एकपटक मुहारमा लगाइसकेपछि यसलाई १० देखि १५ मिनेटसम्म छोडदिने।
छालामा सनब्लकलाई अवशोषित हुन दिने। सनब्लक जहिल्यै पनि ३ देखि चार घण्टाको फरकमा लगाउनु पर्ने उनले बताए। यसैगरी, सनब्लक वा सनस्क्रिन घाममा हिँड्दा मात्र लगाउने भ्रम छ। जुन विलकुलै गलत हो। यसलाई कोठा भित्र बस्दा, कम्प्युटरको अगाडि काम गर्दा, सूर्य तथा बत्तिको प्रकाशमा काम गर्दा, खाना पकाउँदा, टिभी हेर्दा, मोबाइल चलाउँदा समेत लगाउन अनिवार्य रहेको उनले बताए। यस्ता उपकरणले पनि विभिन्न किसिमका किरणहरु फ्यालिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा सनब्लक लगाउन आवाश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, घाममा निस्किनु भन्दा ३० मिनेट अगाडि सनब्लक लगायो भने यसले प्रभावकारी काम गर्ने गर्छ।
सनब्लक वा सनस्क्रिन लगाउँदा गरिने गल्ती
१. थोरै सनस्क्रिन लगाउने बानी
२. यसलाई ३ देखि ४ घण्टाको अन्तरालमा नलगाउनु
३. गुणस्तरीय सनब्लक नलगाउनु
४. रात्रिकालिन ड्युटी गर्दा सनब्लक नलगाउनु
५. चिकित्सकको परामर्श अनुसार छालाको जाँच गराएका सनब्लक नलगाउनु
सनब्लकले छालामा पिगमेण्टेशनहरु आउन दिदैँन। प्रकाशबाट आउने अल्ट्राभायोलेट रेजहरुबाट पनि जोगाउँछ। यसैगरी, यस्ता किरणहरुले गर्दा इलास्टिक फाइबरलाई गढबढ गरिदिन्छ। जसलाई सनब्लकले जोगाउँछ। चिप्लो र चाउरीपनबाट पनि यसले बचाउँछ। सनब्लक मजाले लगाउँदा कालो धब्बाहरु कम हुने, चाउरी पर्न नदिने, छिट्टै बुढ्यौली देखिने समस्याहरुबाट पनि केहि हदसम्म जोगाउने डा. खतिवडाले जानकारी दिए।
चैत्र १७, २०७७ मंगलवार १४:४७:०६ बजे : प्रकाशित
# अनुहार र छालाको सौन्दर्यता
दुबी, कब्जियत, अल्सर निको पार्ने आँकका अनेकन फाइदा
काठमाडौँ । आँक खासगरी नेपालको तराई र भित्री मधेश अर्थात उष्ण क्षेत्रको एक हजार मिटरसम्मको खुला ठाउँमा प्राकृतिक रूपले हुर्केने एक प्रकारको वनस्पति हो। यो वनस्पति नेपालभरी पाइएता पनि खासगरी यो पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका प्रशस्त घामलाग्ने ठाउँहरूमा पाइन्छ। त्यस्ता ठाउँहरुमा विशेषगरी यो राजमार्ग, बगर तथा बाटो छेउछाउ, बाँझो, पर्ती जग्गा एवं सुक्खा बारीहरूमा हुर्कने गरेको पाइन्छ।
आँकलाई संस्कृत भाषामा अर्क, रुद्र तथा मन्दारको नामले चिनिन्छ भने यसले धिमालहरूले आपाङ्गी, नेवारहरूले मन्दार भन्ने गर्छन्। त्यसैगरी, यसलाई , जापानीजहरूले आकोन नामले चिन्दछन्। त्यस्तै हिन्दी र मैथिली भाषामा यसलाई आँक नै भनिन्छ। आँकलाई अङ्ग्रेजीमा जायन्ट मिल्क विड तथा क्राउन प्लान्ट आदि नामले चिनिन्छ।
यसको पात, डाँठ र जरामा कीटनाशक, आन्तरिक बिष र प्रतिकारक पदार्थहरू पाइन्छन्। आँकको बोटको सम्पूर्ण भागलाई धूलो पारी एसिटोनसँग मिसाई त्यसबाट निस्केको रसले उपचार गरेको अनाजलाई धानमा लाग्ने घुनको आक्रमणबाट बचाउँछ।
आँकको पातको धूलो वा झोलले घरको झिंगा, लामखुट्टेका लार्भा र वनस्पतिका पात खाने धेरै थरीका लाभ्रेहरूको पनि नियन्त्रण हुने बताईएको छ। भारतमा पनि यो वनस्पतिलाई विभिन्न थरीका कीराहरूको नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। आँकले सलह र धमिराहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ।
आँकको २०० ग्राम हरियो पातलाई दगल्च्याएर १ लिटर पानीमा १२ देखि १५ घण्टा सम्म ढड्याएर प्राप्त भएको रसले उपचार गरेको प्रत्येक हप्तामा १ पटकको दरले ४ देखि ५ पटक सम्म बन्दाकोपीमा लाग्ने कीराहरूलाई केही मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएककक छ।
आँकको जराको बोक्रा रगतमासी आउँ परेको निको पार्न, शरीरमा पसिना आउने क्रियालाई बढाई कफ बाहिर निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। जराको बोक्रालाई लेदो बनाइ हात्तीपाईले रोग लागेको बेला सुन्निएको भागमा लगाए केहि हदसम्म निको पार्न आँकले मद्दत गर्दछ।
आँकको पातको रस केही समयको फरकमा बारम्बार आइरहने ज्वरोलाई पनि निको पार्न प्रयोग गरिन्छ । यसको चोपले पोल्छ तर सिउँडी सँग मिसाएर कब्जियतलाई हटाउन प्रयोग गरिन्छ।
यसको फूल गुलियो र तीतो हुन्छ र यसलाई धूलो बनाई रुघाखोकी दम जुका परेको र अपचको उपचार गर्न एवंम घाउ निको पार्न प्रयोग गरिन्छ। आँकको बोट हर्षा, रक्तविकार, टाउको र कान दुखेको, दुबी, कब्जियत, अल्सर, शरीरमा गाँठागुठी आएको कुष्ठरोग, भिरिङ्गी, रगतमासी, आउँ, वान्ता, पखाला, पेटमा जुका परेकोलाई उपचार गर्न य्रयोग गरिन्छ।
त्यसैगरी, यसको फूल हातखुट्टाको जोर्नी र मांसपेशी दुखेको सुन्निएको शरीरभित्रका मुटु, कलेजो, पित्तथैली, फोक्सो आदि अङ्गहरू सुन्निएको अवस्थामा उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यसको बोटको सुकाइएको भागहरू दुधसँग दैनिकको रूपमा प्रयोगगर्दा कलेजोको लागि राम्रो हुन्छ। आँकको नयाँ टुसालाई पिंधेर रस निचोरी दाद र अन्य छाला सम्बन्धि रोगमा दल्दा निको हुन्छ।
यसको चोपलाई आन्तरिक श्राव जम्मा भएको तथा पेटको रोगहरूको उपचार गर्न र पिलोलाई पकाउन प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी, यसको पातबाट पक्षघात जोर्नी दुखेको, सुन्निएको कान दुखेको तथा घाउलाई उपचार गर्न सकिन्छ।
बैशाख १५, २०७८ बुधवार १९:२०:११ बजे : प्रकाशित
के नरिवल पानी पिउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ ? जान्नुहोस्, शरीरका यसको फाइदा
काठमाडौँ। मुलुकमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण तिव्ररुपमा बढ्ने क्रम जारी छ। देशभरका अस्पतालहरु पनि यति बेला धराशाय बनेको छ। बिरामीहरुले अस्पतालमा शय्या तथा अक्सिजन नपाएर भौतारिने अवस्था छ। देशलाई नै यस्तो संकट परेको बेला सबै नागरिकहरुले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी, यस्तो अवस्थामा आफु संक्रमित हुनबाट बच्नु र अस्पताल जानबाट जोगिनका लागि आफू सचेत र सावधानी अपनाउन जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यतिबेला, संक्रमण रोकथाम गर्न र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हरेकले थुप्रै किसिममा उपायहरु अपनाइरहेका छन्। स्वस्थ र सन्तुलन आहारको सेवन गर्नुका साथै विभिन्न आयुर्वेदिक तथा घरयासी पेय पदार्थ सेवन गरेर आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने क्रममा लागेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नरिवल पानी पनि एक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने एक पेय पदार्थ मानिएको अध्ययनहरुले देखाएको छ। नरिवल पानीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मात्र नबढाएर यसले कोरोनासँग लड्ने क्षमता पनि प्रदान गर्ने तथा अन्य धेरै रोगहरूका लागि पनि यो फाइदाजनक हुने प्रिया पाण्डे डायटिशियन (आहार विशेषज्ञ) ले जानकारी दिईन्।
जानिराखौँ नरिवल पानीका फाइदाहरु :-
१. कलेजोको लागि लाभदायक – नरिवल पानी कलेजोको लागि निकै लाभकारी मानिन्छ। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू हुन्छन्, जसले कलेजोबाट धेरै प्रकारका विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न र कलेजोलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउँछ।
२. उच्च रक्तचापका लागि फाइदाजनक – नरिवल पानीमा प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी, पोटाशियम र म्याग्नीशियम लगायतका अन्य महत्वपूर्ण खनिज तत्वहरु पाइन्छ। जसका कारण उच्च रक्तचाप नियन्त्रणको लागि नरिवल पानी लाभदायक मानिन्छ। त्यसैगरी, थुप्रै अध्ययनहरूले पनि नरिवल पानीले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने पुष्टि गरेको छ।
३. मुटु रोगको जोखिम कम गर्ने – नरिवलको पानीमा यस्ता गुणहरू पाइन्छन्, जसले शरीरमा भएका नराम्रा कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ । यसको नियमित सेवनले पक्षघात हुने जोखिम पनि कम गर्छ।
४. गर्भवती महिलाहरूको लागि लाभदायक – गर्भवती महिलाहरुलाई नरिवल पानी पिउन विशेष सल्लाह दिइन्छ। वास्तवमा, गर्भावस्थामा महिलालाई थुप्रै पोषक तत्वहरूको आवश्यकता हुन्छ। नरिवलको पानी सेवन गर्दा केहि हदसम्म यस्ता आवशयकताको पूर्ति गर्न मद्दत गर्दछ। गर्भावस्थामा नरिवलको पानीले पिउँदा कब्जियत हुने, थकान हुने समस्याबाट राहत प्रदान गर्दछ। यस बाहेक यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि सुधार गर्दछ र शरीरमा पानीको अभाव पनि पूरा गर्दछ।
नरिवल पनि कति बेला सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
नरिवल पानी कुनै पनि समयमा सेवन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यसलाई बिहान खाली पेटमा सेवन गर्दा अझ प्रभावकारी र फाइदाजनक हुन्छ। यसले बिहानको सुस्तता हटाइ दिनभरीको लागि ऊर्जा प्रदान गर्दछ।
बैशाख २०, २०७८ सोमवार १२:३०:३५ बजे : प्रकाशित
# नरिवल पानी
# रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
विभिन्न रोग निको पार्ने मरिच कसरी खाने ? यस्तो छ विधि र तरिका
काठमाडौँ। मरिच एक औषधीय गुण भएको मसला हो। यसलाई दुध, चिया, रोटी, तरकारी आदिमा मसलाको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। मरिचका विरुवाहरुको मूल स्थान दक्षिण भारत मानिन्छ। विशेषगरी भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा यसको खेती गरिन्छ। विश्वप्रसिद्ध भारतीय गरम मसलाहरूमा, ऐतिहासिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले, मरिचको धेरै नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा यसको वर्णन र उपयोग प्राचीन काल देखिनै चलि आइरहेको छ।
मरिच सुगन्धित, उत्तेजक र स्फूर्तिदायक खाद्य वस्तु हो। आयुर्वेद र यूनानी चिकित्साशास्त्रहरूमा यसको उपयोग कफ, वाथ, श्वास, अग्निमान्द्य उन्निद्र इत्यादि रोगहरूमा हुने भनिएको छ। भोक बढाउने र ज्वरो कम गर्नलाई दक्षिण भारतमा यसको विशेष प्रकारले प्रयोग गरिन्छ । भोजनमा मसलाको रूपमा यसको उपयोग सर्वत्र हुन्छ। पाश्चात्य देशहरूमा यसको विशिष्ट उपयोग विविध प्रकारको मासु, खाद्य पदार्थहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
टाउको दुखेमा – गाईको घिउ पाँच चम्चा तताउनुहोस् र सात गेडा मरिच डडाउनु र छानेर राख्नु । टाउको दुखेको बेलामा घ्यू कंचटमा दल्नु टाउको दुखेको समस्यामा प्रभावकारी हुन्छ।
आधा टाउको दुखेमा – मरिचलाई पानीमा पिनेर लेप बनाउने र दाहिने पट्टिको टाउको दुखेको भए देब्रेपट्टिको कंचटमा लेप लगाउने र देब्रे पट्टीको टाउको दुखेको भए दाहिनेपट्टिको कंचटमा लेप लगाउने गरेमा ठीक हुन्छ ।
रुघाखोकी लागेमा – १०–१५ दाना फुराएको मरिच पिनेर फिटेर दैनिक सेवन गर्ने गरेमा बिग्रेको रुघाखोकी १ हप्तामै ठीक हुन्छ ।
कफ र खोकी लागेमा – १ दाना फुराएको मरिच मसिनो गरी पिनेर १ चम्चा सख्खरमा मुछेर सानो–सानो गोली बनाउनुहोस् र दिनको तीन–चार वटा गोली चुस्ने गर्नुहोस्, यस्तो प्रक्रियाले कफ निकालेर खोकी ठीक गराउँछ ।
धेरै बाडुल्की लागेमा – अत्याधिक बाडुल्की वा हिक्क आउने समस्या भएमा मरिचलाई डढाएर त्यसको धूँवा सुँघेमा एकै छिनमा ठिक हुन्छ ।
कफ जमेर गाह्रो भएमा – फुराएको मरिचको धूलो १ चिम्टी १ चम्चा महमा फिटेर दिनको ३–४ पटक चाट्ने गरेमा केही दिनमै ठीक हुन्छ ।
जाडोले कामज्वरो आएमा – एक डाडु घ्यूमा एक चम्चा मरिचको धूलो डढाएर, र खाने कपुरका २–४ पुरिया हालेर शरीर भरी मालिस गरेमा शरीर तातेर आउँछ र ठीक हुन्छ ।
आँखामा रतन्धो भएमा – दहीमा फुराएको मरिच पिनेर सुत्ने बेलामा आँखामा लगाउने गरेमा एक–दुई हप्तामा ठीक हुन्छ ।
घाँटी सुन्निएको वा टन्सिल बढेको अवस्थामा – पानीमा मरिच पिनेर लेप बनाएर घाँटीमा लगाउने गरेमा घाँटी सुन्निएको, टन्सिल बढेको आदि रोग निको हुँदै जान्छ।
दम खोकी लागेमा – आधा चम्चा दालचिनीको धूलो, एक चिम्टी मरिचको धूलो, आधा चम्चा जेठीमधुको धुलो, चारवटा कण्ठकारीको फल, दुई चम्चा मिश्री एक माना पानीमा पकाउने र एक चौथाई भएपछि छानेर शिशीमा राख्ने र दिनको तीन पटक विहान दिउँसो बेलुका खाने गरेमा ठीक हुन्छ । अथवा १ चम्चा मनतातो भाङको रसमा १ चिम्टी मरिच र मिश्री फिटेर खाने गरेमा दमको रोग कम हुदै जान्छ ।
दाँत कीराले खाएमा – दाँतको प्वालमा कपुर हाल्नाले दाँत दुख्न बन्द हुन्छ र कीरा पनि ठीक हुन्छ । अथवा मरिचको धूलो, खयर, कपुर बराबर पिधेर दाँत माज्ने गरेमा गिजापाक्ने, दाँत हल्लिने, कीराले खाएको लगायतका रोगहरु ठीक हुँदै जान्छ।
बैशाख २८, २०७८ मंगलवार १६:४१:११ बजे : प्रकाशित
# मरिच एक औषधीय गुण
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लक्षण जटिल भएको वा नभएको थाहा पाउने चार सङ्केत
काठमाडौँ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लक्षण जटिल भएको वा नभएको थाहा पाउने चार सङ्केत नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्ने क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्पतालहरू खचाखच छन् भने होम आइसोलेशनमा नै बसेर उपचार गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। तर सङ्क्रमितहरूमा देखिएका लक्षणका आधारमा सामान्य वा जटिल कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको यकिन गर्न भने कठिन रहेको सङ्क्रमितहरू बताउँछन्।
जसका कारण स्वयम् सङ्क्रमित तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू त्रास तथा तनावबाट गुज्रिएको बताइन्छ। सुरुवाती लक्षणबाट नै आफूलाई जटिल वा सामान्य कोभिड छ भनेर पहिल्याउनका लागि वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा‌. ओममूर्ति अनिलले केही उपाय सुझाएका छन्।
हेर्नुहोस् उनीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा बीबीसीले बनाएको यो भिडिओ।
बैशाख २९, २०७८ बुधवार ११:२८:४३ बजे : प्रकाशित
अक्सिजनको स्तर बढाउन र फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न खानुहोस् यी खानेकुरा
काठमाडौँ। शरीर स्वस्थ रहन फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्न आवश्यक छ। फोक्सोले फिल्टर गरेपछि मात्र अक्सिजन शरीरको प्रत्येक भागमा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा फोक्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि फोक्सोले राम्ररी काम कार्य गरेन भने दम, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, क्षयरोग, क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, कोरोनाभाइरस महामारीबाट बच्नको लागि फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिन्छन्। किनभने, कोरोनाभाइरस सिधै फोक्सोमा प्रहार गर्दछ, फलस्वरूप अक्सिजनको स्तर कम हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ।
कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर चलेपछि अधिकांश बिरामीहरुलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। शरीरमा अक्सिजनको स्तर द्रूूत रूपमा कम भइरहेको छ। संक्रमण भएको केहि दिनमै अक्सिजनको स्तर ८० भन्दा कम भएको उदाहरणहरु सार्वजिक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अक्सिजन तुरून्त आवश्यक हुन्छ। यदि यस अवधिमा समयमै अक्सिजन उपलब्ध भएन भने अवस्था गम्भीर हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिले देखिनै फोक्सोको ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
बेसार – बेसारमा एन्टी–अक्सिडेण्ट र एन्टी–इन्फ्लेमेटरी गुणहरू हुन्छ जसले सबै प्रकारका संक्रमणहरूबाट बचाउँछ । दैनिक सुत्नु अघि दुधमा बेसार मिलाएर पिउँदा निकै लाभदायक हुन्छ। यसैगरी, बेसार, गुर्जो, दालचिनी, ल्वाङ, अदुवा र तुलसीको पात मिलाएर काडापानी बनाउन सकिन्छ। यसले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्नुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि मजबूत गर्दछ।
मह – आयुर्वेदमा महको थुप्रै वर्णन गरिएको पाइन्छ। यसमा एन्टि–ब्याक्टेरियल गुणहरू हुन्छन, जसले शरीरबाट विषाक्त तत्वहरु निकाल्न मद्दत गर्दछ र फोक्सोलाई पनि स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। महलाई बिहान मनतातो पानीमा कागतीको रस मिलाई पिउन सकिन्छ। यस बाहेक, महलाई काडा पानीमा पनि मिलाउन सकिन्छ।
तुलसी – तुलसी पातमा अधिक मात्रामा पोटासियम, आइरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, क्यारोटीन र भिटामिन सी पाइन्छ। जसले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। दैनिकरुपमा ४ देखि ५ वटा तुलसीको पात चपाउँदा निकै प्रभावकारी हुन्छ। यस बाहेक, तुलसी र गुर्जोको काडा पानी पनि बनाउन सकिन्छ।
नेभारा – नेभारामा धेरै चमत्कारिक तत्वहरू पाइन्छन्। यसमा भिटामिन ए, भिटामिन–सी, भिटामिन–के, पोटासियम, म्याग्नेशियम, कपर र आइरन जस्ता आवश्यक पोषक तत्वहरू पाइन्छन्। यसको सेवन गर्दा फोक्सो बलियो हुनुको साथै मुटुको स्वस्थलाई पनि राम्रो गर्छ।
लसुन – लसुनमा एन्टिबायोटिक, एन्टिफङ्गल, एन्टिवाइरल गुणहरूको साथसाथ क्याल्सियम, फास्फोरस, आइरन, भिटामिन जस्ता गुणकारी तत्वहरूले समृद्ध हुन्छ। जसले फोक्सोलाई बलियो राख्न मद्दत गर्दछ। प्रत्येक बिहान खाली पेटमा २ देखि ३ वटा पोटी खाएमा ग्यास्ट्रिकलाई पनि ठिक गर्दछ। यदि लसुन त्यतिकै खाँदा पिरो हुन्छ भने यसलाई राति पानिमा भिजाएर र बिहान सेवन गर्न सकिन्छ।
बैशाख २९, २०७८ बुधवार १९:००:३९ बजे : प्रकाशित
# फोक्सोलाई बचाउने
# फोक्सो र मुटु
गुर्जो र तुलसीले कसरी गर्छ प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत ?
काठमाडौँ। कोरोनाभाइरस व्यक्तिगत स्तरमा लडाइँ आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताबाट सुरु हुन्छ। तुलनात्मकरुपमा पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो लहर सुरु भएपछि विश्वभर चिन्ताजनक अवस्था छ। दोश्रो लहरको कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि मानिसहरु थुप्रै घरेलु औषधिहरुको उपयोग गर्न थालेका छन्।
विभिन्न जडीबुटी मिश्रण गरेर काडा पानी बनाउने तथा पोषकयुक्त आहार प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न थालेका छन्। विश्वभारका मानिसहरुले सन्तुलित आहारको महत्त्वलाई बुझ्न थालेका छन्। र यस्तो महामारीको बेला पोषणयुक्त खानेकुराहरु खान आवश्यक पनि हुन्छ। जसमा प्रशस्तमात्रामा आइरन, प्रोटिन, भिटामिन सी, बि १२ र ए होस् ।
घरेलु उपाय अपनाइ राख्दा पनि सबै जनमानसले चिकित्सकहरुको सल्लाह तथा स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाउन आवश्यक छ। यसैगरी, जटिल बन्दै आएको कोरोनाभाइरसको महामारीसँग लड्न शताब्दियौं वर्ष आयुर्वेदको पद्धतिलाई अपनाउँदा धेरै हदसम्म प्रभावकारी हुनसक्छ। जसमा आवश्यक पोषक तत्व हुन्छन् र चिसो, फ्लू , ज्वरो लगायतका थुप्रै संक्रमण लड्न क्षमता प्रदान गर्दछ।
गुर्जो र तुलसीले कसरी फाइदा पुग्छ ?
गुर्जोमा प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार गर्ने तत्वहरु पाइने अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। साथै यसले शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न पनि मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी, गुर्जोमा एन्टिपायरेटिक गुण हुन्छ। जसले ज्वरो नियन्त्रण गर्न मुख्य भूमिका खेल्दछ। शीतल गुण भएको गुर्जोको सेवनले गर्मीबाट टाउको दुखेको, आँखा, पिसाब, पैताला हात खुट्टा र जीउ पोल्ने समस्याको पनि समाधान गर्छ।
त्यसैगरी, तुलसीलाई ’जडिबुटीहरूको रानी’ भनेर पनि चिनिन्छ। कोरोनाभाइरसको महामारी बढेसँगै मानिसहरुले तुलसीको प्रयोगमा बढी जोड दिन थालेका छन्। यस स्थितिमा चिकित्सकहरुले तुलसीको प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दै आएका छन्। वैज्ञानिकरुपमा मात्र नभएर तुलसीको अध्यात्मिकरुपमा धेरै उपयोगी मानिन्छ। तुलसीले विभिन्न रोगलाई रोकथाम गर्न, सामान्य स्वास्थ्यको बढवा गर्न र दिनभरीको थकान र तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
तसर्थ, यी दुई उत्कृष्ट जडिबुटीहरूको संयोजनले स्वस्थ र दीर्घायू जीवनलाई बढवा गर्छ। त्यसैगरी, गुर्जो र तुलसी परम्परागत रूपमा परिचित जडिबुटी पनि हो। जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको स्तर बढाउँदछ र सबै तीन ’दोष’ लाई सन्तुलनमा राख्ने विश्वास गरिन्छ ।
यद्यपि, दुवै जडिबुटीहरू अत्याधिक प्रयोग वा केही अवस्थामा हानिकारक पनि हुनसक्छ। यी दुबै जडिबुटीको प्रयोग उचित र सन्तुलितरुपमा गर्नु पर्दछ।
बैशाख ३१, २०७८ शुक्रवार १८:१९:२६ बजे : प्रकाशित
# मानिसको प्रतिरक्षा प्रणाली
# प्रतिरक्षा प्रणाली